Cylinder Head, Kudya Kwakawanda, Aluminium Die Kukanda Zvikamu - Yongyu
AJM Aluminium humburumbira musoro 03G103351C / 03810335 ...
BYT Aluminium humburumbira musoro 06H103064A
D4CB-VGT Aluminium humburumbira musoro 22100-4A210 / 22 ...
FICE3481M / E / N Aluminium humburumbira musoro 0200KC
F1AE Aluminium humburumbira musoro 504049268
1005B452 Aluminium humburumbira musoro 4D56U / 4D56HP
4D56 Aluminium humburumbira musoro MD109736
WEWLAT Aluminium humburumbira musoro WE01-10-100K
DW8DW8T Aluminium humburumbira musoro 02.00.CP
F8Q600 Aluminium humburumbira musoro 7701478460
ZD30 Aluminium humburumbira musoro 7701058028
WL Aluminium humburumbira musoro WL1110100E
Taizhou Yongyu Maindasitiri CO., LTD. yakavambwa muna 1994. Iyo kambani yakazvipira kune iyo aluminium auto zvikamu zvekugadzira kweanopfuura makumi maviri emakore. Ikozvino kambani ine nzvimbo yekuvaka yemakumi mana emamirimita emamirimita uye inoshandisa vanhu vanopfuura mazana matatu. Iyo ine yepamusoro-soro manejimendi timu uye vanopfuura makumi masere ehunyanzvi uye ehunyanzvi vashandi. Iyo kambani inyanzvi OE mutengesi iyo inotarisa pane kukweva giravhiti、yakaderera-kumanikidzwa kukanda uye kufa kukanda. Kubudirira、 Kudzinga uye kuburitsa kugona kwekambani inoramba ichitungamira mune imwechete indasitiri. Iyo kambani inopinza huwandu hukuru hweakakwira-chaiyo machining uye ekuyedza michina, kuverengera chigadzirwa mhando uye sevhisi kuzadzisa iyo OE mhando zvinodiwa. Nekudaro inozvigadzirira yega inoenderera musika yemakwikwi mukana, uye chigadzirwa chakapihwa pasirese chakakunda kurumbidzwa kwevatengi zvakanyanya.
Yedu yekutengesa timu yakapinda Automechianika ...
Yedu yekutengesa timu yakapinda Automechianika Shanghai Show paDec. 3th.2019.
092020 / Chikumi
PaJune 9th.2017, munyori weYuhuan munic ...
Musi waJune 9th.2017, munyori weYuhuan manisiparati bato neboka rake vakasvika YONGYU kuzoita research. Akataura zvakanyanya nezve budiriro iyo YONGYU yakawana mumakore achangopfuura, uye kukurudzira munhu wese ari pachigaro uyo anoshanda pamota uye Midhudhudhu ...
012020 / Chivabvu
Kutengesa mota mumusika weUS
Kuunganidzira kuongororwa kwakanaka kwecarcarbadcar, kutengesa mota mumusika weUS muna Chivabvu 1 2020 kurasikirwa kwakatenderedza 20% kupfuura mwaka wakafanana wegore rapfuura. Tarisa tafura yedata, Hyundai kutengesa kwaitonhorera kwakatenderedza 38% kupfuura gore rapfuura mumwedzi mumwe chete. Mazda kutengesa wa ...